NOOCA DHIRTA LAFDHABARTA AH: SIFEYNTA DHIRTA IYO NOOCYADA KALA DUWAN - MARBASKA TYULPANKA IYO EMMA TULIP, SAWIR UBAX, HADDII MIRAHA AY KA DUWAN TAHAY GEEDKA GERANIUM IYO DHALMO - SOOSAARKA DALAGGA
Tulip pelargonium waa mid ka mid ah wakiilada ugu quruxda badan ee qoyskan.
Magaca ubaxa waxay u egtahay mid isku mid ah oo la mid ah tulip aan la furin.
Badanaa kala duwanaanshahan waxaa lagu wareersan yahay geraniums rozbudna. Laakiin dhirta ayaa si buuxda u kala duwan.
Qodobkan waxaan ku falanqeyneynaa sifooyinka noocyada kala duwan ee lafa-qabatada oo kale.
Qeexitaanka Botanical ee noocyo, taariikh iyo sawir
Markii ugu horreysay tan kala duwan ee Pelargonium waxay u muuqatay dadweynaha guud ahaan qeybtii labaad ee qarnigii labaatanaad - 1966. Dhacdadani waxay ka dhacdey Maraykanka, xannaanadii Andrea. Kala duwanaanshaha ugu horeeya waxaa la siiyay magac sharaf ka mid ah xubno ka mid ah xubnaha qoyska - Patricia Andrea. Sannadaha soo socda, qoyskan beeralayda ubaxa waxay keeneen dhowr nooc oo kale.
Waxaa haboon in la sheego in ay tahay noocyada kala duwan ee pelargonium in ay aad u adag tahay in la jiido, sidaas darteed xilligan xaadirka kaliya 14 noocyo tulip cusub cusub loo yaqaan. Haddii aan ka hadalno kharashka ubaxa, ka dibna ma aha wax yaryar - celcelis ahaan, midka jarjaran ayaa qarash gareeya 400 gris. Iyo qiimaha qaar ka mid ah noocyo waxay soo baxaan ilaa 700 RUB. Sida horey loogu soo sheegay, ma jiraan noocyo farabadan ee pelargonium this. Waxaan ku sharxeynaa kuwa ugu caansan - Marbaska Tulip iyo Emma Tulip.
Darajadani waxay ku kala duwan tahay saameynta qurxinta gaar ahaaneed iyo naqshadeynta. Petals waxay leeyihiin midabka jilicsan jilicsan, mararka qaarkood xitaa soo rogaan caddaan cad. Laakiin cidhifyada tufaaxu waxay u beddeshaa hooskii madow ee casaan, taas oo ka dhigaysa midabkan ubaxa, iyo muuqaalkeeda waa mid gaar ah.
Waxaan si muuqaal ah u arki doonaa fiidiyowga waxa Pelargonium Marbasca Tulip u eg sida:
Kala duwanaantani waxay la yaaban tahay muuqaalkeeda - burooyinkeeda ayaa yar yarqaado shimid meel u dhaxaysa jaalaha iyo beige. Buds ayaa lagu ururiyaa buraashyo dhowr ah.
Qeexida muuqaalka midabada iyo qaababka
Nooca dhirta laf-dhabarka leh waa noocyo ubaxyo ah oo soo jiidan kara qof kasta oo soo maraya. Dhirta noocan oo kale ah ayaa lagu beeray gudaha gudaha iyo dibedda. Ogsoonow in ubaxyadaasi ay ka mid yihiin qiyaasta caadiga ah iyo cirifka.
Faallooyinka ku yaala geesaha waxay noqon karaan kuwo fudud oo ah siman ama qallayl, marmarka qaarkoodna xitaa wax yar buufiyay. Qalabka tiknoolajiyadu waa gaajo. Dusha sare ee gudaha ayaa inta badan ka baxsan dibadda. Xaaladdani waxay siisaa dhirta oo dhan dhar gaar ah. Buds ayaa had iyo jeer lagu ururiyaa buraashka dhowr qaybood - oo ku yaala ubaxyada waxaa laga yaabaa inay noqoto 20 ilaa 40 gogo '. Tani waxay abuurtaa nooc ka mid ah "koofiyadda ubaxa" oo ku saabsan qaybta dhan ee pelargonium.
Haddii aan ka hadalno santuuqa tafaariiqda, ka dibna halkan waxaad ku daawan kartaa noocyo kala duwan, laakiin wali waa ku sarreysaa midabyada casaan iyo burgundy. Xaaladaha badankood waxaa ku jira xididada duleelka ah ee dabiiciga ah.midabka midabkiisu ka yaryahay mid ka mid ah midabka ugu weyn ee mugdiga oo dhan. Tani waa tilmaan kale oo ka mid ah laf-dhabarka. Taabashooyinka caleenta qaabdhismeedka cufan, xitaa adag, dhalaalaya, yar yar oo muuqaal ah. Heerka dhirirka waxay ku xiran tahay nooca dhirta. Waxay gaari kartaa 30 illaa 70 sentimitir.
Sida dhammaan wakiillada kale ee pelargoniums, waxay jecel yihiin meelo iftiin leh. Si kastaba ha ahaatee, waxaan xasuusineynaa in iftiinka waa inuu ahaado, dabcan, badanaa, laakiin weli waxaad u baahan tahay inaad qarsato ubaxa qorraxda kulul. Inta lagu jiro mudada kulul, Pelargonium waxaa lagu daraa qalab kala duwan. Tani waxay noqon kartaa warqad ku qoran windowsill iyo, haddii aan ka hadlayno dhulka furan, markaa waxaad isticmaali kartaa shabakadda.
Waxay fiicnaan laheyd in la daryeelo iftiinka macmal ee xilliga jiilaalka. Sidaa awgeed dhirta ayaa ka badbaadi doonta jiilaalka si ka wanaagsan, iyo daryeelka saxda ah sidoo kale sidoo kale ku farxi doonaa geedka iyo ubax.
Khibrad leh beeraleydu waxay ku talinayaan in ay ka soo baxaan dhirta dhirta. Tan iyo marka kiiskan ubax ma helin dhammaan nafaqooyinka, sidaas darteed waxay horumarisaa si buuxda. Tilmaamaha ugu horreeya ee la'aanta iftiinka waa caleemaha cirridka iyo kuwa daciifka ah oo sareeya. Calaamadda labaadna si buuxda uma furin burooyinkeeda.
Si loo beero tuluunta pelargonium, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo substrate diyaar u ah tan, taas oo laga iibsan karo waax kasta oo ubaxa. Laakiin waxaad diyaarin kartaa ciidda iyo guriga. Taas awgeed waxaad u baahan tahay inaad qaadatid peat iyo beerta beerta. Ka dibna ku dar isku dar ah dhamaystirka waxaa lagu daraa ciid webiga. Tani waa lagama maarmaan si ay ciidda uga dhigto hawo ka sii deyn- iyo biyo-la iska qaado.
Caawimaad! Sidoo kale ha ilaawin lakabka dheecaanku, dhererka kaas oo ah inuu yahay 3-4 sentimitir. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo dhagaxyada saxaraha ah.
Inkasta oo dhammaan qurxinta, pelargoniums waa wax aan qabyo ahayn ee daryeelka. Waa ku filan tahay in biyo la siiyo wakhtiga oo keliya iyo si loo hubiyo habka saxda ah ee saxda ah.
Xilliga xagaaga, waxaa lagama maarmaan ah in la qoyo ciidda wax yar ka badan cimilada qabow. Gaar ahaan, gaar ahaan, pelargonium waxaa la waraabiyaa qiyaastii 3-4 jeer toddobaadkii xagaaga, laakiin xilliga qaboobaha - kaliya toddoba maalmoodba mar. Inta lagu jiro qoyaanka ciidda, waa lagama maarmaan in la hubiyo in biyaha aysan ku urursanayn digsiga. Isla marka aad tan ogaatid, isla markiiba daadi dareeraha xad-dhaafka ah. Tan iyo markii uu istaagay wuxuu horseedi karaa guuldarada nidaamka xididka, iyo weliba sii dhimashada dhamaystirka geedka.
Pelargonium waxaa badanaa la bacrimiyaa inta lagu jiro xilliga koritaanka firfircoonida iyo horumarka, waxay dhacdaa xilliga guga horraanta illaa bilaha-badhtamaha. Inta lagu jiro dormancy geedka uma baahna quudin dheeraad ah. Waa lagama maarmaan in la doorto dhismayaasha diyaarka ah ee bacriminta, waa in ay noqoto qaab-dareere ah - waxay u sahlanaan doontaa inay keenaan ciidda. Sii dookha doorashooyinka noocan oo kale ah kaas oo nitrogen lagu hayn doono heerka ugu hooseeya. Haddii kale, ma jiri doonto ubax dhan, ama waxay noqon doontaa mid aad u yar.
Tilip Peljonium waxay u baahan tahay manjooyin joogto ah iyo jiido caleemaha cusub. Tani waa dhammaan lagama maarmaan si loo abuuro baadiyaha quruxda badan leh. Intaa waxaa dheer, gooyaa waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda:
caleemaha dhinaca dhaqdhaqaaqa;
Inflorescences waxay sameeyaan dhakhso iyo tirooyin badan.
Natiijada qanjaruufo waa qaabka saxda ah ee baadiyaha. iyo cirridka ubaxyada. Sidoo kale waa muhiim gaar ah inaadan iloobin inaad ka saarto burooyinkeeda ubaxyada, maxaa yeelay waxay ka qaadaan nafaqooyinka ka soo geedka oo dhan, ha u oggolaanin burooyinkoodii cusub inay sameeyaan.
Sida ugu dhakhsaha badan ubaxu wuxuu ogaaday in burooyinku ay noqotey mid aad u ballaaran oo isla markaana lumiyo qaabka laleh, lulmooyinka noocan oo kale ah ayaa laga saaraa, sidaa darteed burooyinkooda soo socda ma ayan "ku dhicin habdhaqan la mid ah." Ka dib markii ay ka saareen inflorescences "qaldan", caleemaha cusub ayaa kori doona midabada saxda ah. Guud ahaan, xaqiiqda waxay soo jeedineysaa in marka xulashada sifooyinka noocyada ay si aan fiicnayn ugu dhexjiraan geedka dhirta.
Waa in hawo lagu nuugo, tan iyo hawada joogtada ah waxay keeni kartaa horumarinta cudurada iyo cayayaanka on tulipi pelargonium. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la hubiyo in hawo-qabashadu aysan u noqonin qorshe waxyeello leh.
Haddii dhirta ay koraan dibedda, marka dabaylaha xooggan waxaa lagula talinayaa in ay qariyaan ubaxa qoraallada leh wax.
Mararka qaarkood waxaa dhacda in tulse-cilladu u lumiso muuqaalkiisa gaarka ah waxayna noqotaa wakiil caadi ah oo qoyskeeda ah. Si looga hortago tan, waa inaad raacdaa xeerarka soo socda:
waqtigaa ka saaro burooyinkeeda yar;
si joogto ah u jeexan caleemaha koray;
ka takhalusaan inflorescences in ay helaan sifooyinka noocyada khaldan;
xaddid warshad laga bilaabo qoraalada iyo nalka qorraxda.
Sida dhirta kale ee dhirta lagu beeray, tulubka pelargonium wuxuu u nugul yahay weerarada cayayaanka iyo cudurrada. Ka feker sida loo aqoonsado cudurada iyo si haboon ula macaamilka. Cayayaanka ugu caansan ee noocyada kala duwan ee pelargonium waa caarada caddaan iyo caarada. Haddii aan ka hadalno cudurada ugu caansan, waa dufan iyo kallana (labadaba cagaar iyo xididba). Aqoonsiga marxaladaha hore ee horumarka waxay noqon karaan sababaha soo socda:
cadaan iyo caddaan cad;
Bloom on undersides ee caleemaha;
guduudashada caleenta caleen iyo caleemaha.
Dhammaan tan waxa loola dhaqmaa si loo caawiyo daaweynta dhirta leh cayayaanka. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu iibsado dukaamo khaas ah, kadibna si adag u hoggaansamaan tilmaamaha isticmaalka, ee aan ka badnayn qiyaasta. Hal dalab ma aha mid ku filan. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la socodsiiyo ubaxa dhowr jeer, ilaalinta mudo ah 7-10 maalmood.
Hoyga, waxaa suurtogal ah in dacaayad laga sameeyo tulip-tikotifiyada Pelargonium oo kaliya goynta. Abuurku wuxuu ku jiraa aalad aad u adag, maahan in dhirta yaryar ee fudud ay awood u yeelan doonto in ay soo saaraan waxyaabaha abuurka - kaliya breeder khibrad ayaa sidan samayn kara. Wixii koritaanka jarjaridda u baahan tahay:
Qaado a laabka biqil dhalinyaro ah, taas oo ay jiraan caleemo dhowr ah.
Kadibna jirida ayaa lagu riday biyaha si ay u soo baxaan. Tani waxay noqon doontaa mid ku filan maalmo badan. Intaa waxaa dheer, heerka koritaanka xididkan waa suurtogal ah iyada oo aan dhammaan noocyada kicinta.
Ka dib markaa, jirida waxaa lagu beeray weel yaryar, kaas oo ay tahay in ay ahaato ciidda isku midka ah ee geedaha qaangaarka ah. Ogsoonow in heerka badbaadada ee pelargonium-tulip-shaped waa mid aad u fiican.
Haddii aad xiiseyneyso sifooyinka noocyada kale ee pelargonium, ka dibna ka akhriso Klara San, Zonartic, jaalle, Bold, Norland, Grandiflora, Denise, Pink, Salmon, Anita.
Maqaalkani waxaan kuu soo bandhigay warshad noocan oo kale ah sida lalabada pelargonium. Xor ayaad u buuxsami kartaa si aad u buuxiso ururinta ubaxaaga leh dhirtaas, maadaama ay tahay mid aan qabyo ahayn oo daryeelkeeda, laakiin isla markaa waxay leedahay tayada dibadeed ee fiican.